Wararka Maanta: Arbaco, Oct 14, 2020-Mid kamid ah jilaayadii ugu caansanaa dunida Carabta oo geeriyooday
Waxa uu ahaa xiddig rug caddaa ah oo ku wanaagsan sameynta Aflaanta iyo majaajiladda.
Sanadkii 1942-dii ayuu ku dhashay magaalada Port Said, ka hor inta uusan noqon Jilaa wuxuu bartay sharciga, hase-ahaatee kuma uusan shaqeyn.
Hase-ahaatee xirfadda jilaanimada ayuu ku biiray sanadkii 1960-dii , sida lagu qoray wargeysyada kasoo baxa Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar.
Maxamed Yaasiin wuxuu dowr jilliin ah ku lahaa in ka badan 150 film , halka 60 musalsallo telefashinno ka baxay uu ka qeyb-qaatay. Taas ayaa dhaxal siisay inuu caan ka noqdo gudaha waddanka Masar.
Geeridiisa ayaa waxaa aad uga tacsiyeynaya bulshada Carabta, waxayna ku tilmaamayaan “inuu yahay qof aad loo jeclaa oo ay ciidda qarin doonto”.